बारमा दुई तिहाई प्रगतिशीलले जित्दा यसरी हारे महासचिवमा सुरेन्द्र ? - Jhilko
बारमा दुई तिहाई प्रगतिशीलले जित्दा यसरी हारे महासचिवमा सुरेन्द्र ?
काठमाडौं । गत शनिबार भएको कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोशिएशनको निर्वाचनमा प्रगतिशील समूहले दुई तिहाईसहितको बहुमत हात पार्दा महासचिव जस्तो जिम्मेवार पद लोकतान्त्रिक समूहको पोल्टामा जाँदा प्रगतिशीलहरु आश्चर्यमा परेका छन् ।
सत्तारुढ दल बाम निकट प्रगतिशील, पेसागत तथा समावेशी समूहका अध्यक्षका उम्मेदवार चण्डेश्वर श्रेष्ठ विजयी हुँदा उनका प्रतिद्वन्द्वी लोकतान्त्रिकका सुनीलकुमार पोखरेल पराजित भए । श्रेष्ठले चार हजार २२ मत ल्याए भने पोखरेलले तीन हजार आठ सय ७३ मत प्राप्त गरे ।
बारको २५ सदस्यीय कार्यसमितिमा २२ जना प्रगतिशील समूहबाट विजयी भए । बारमा सत्तारूढ नेकपा निकट प्रगतिशील समूहबाट एक अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सात जना उपाध्यक्ष र १३ केन्द्रीय सदस्य समेत निर्वाचित भए ।
यो जितसँग कार्यसमितिमा प्रगतिशील समूहको स्पष्ट दुई तिहाइ जित हात परेको छ । प्रदेश ५ को उपाध्यक्षमा लोकतान्त्रिक समूहका सुनीलकुमार श्रेष्ठ तीन हजार नौ सय ८६ मत र मधेसी/मुस्लिम खुला सदस्यमा मनोजकुमार चौधरी तीन हजार नौ सय ३० मत ल्याएर विजयी भए ।
महासचिवमा लोकतान्त्रिक समूहका सुरेन्द्र कसरी हारे ?
बारको महासचिवमा लोकतान्त्रिक समूहका लीलामणि पौडेल विजयी हुँदा प्रगतिशील समूहका सुरेन्द्र थापा मगर पराजित भए । पौडेलले थापालाई चार सय ७७ मत अन्तरले पराजित गरे । पौडेलले चार हजार एक सय ७८ ल्याउँदा थापाले तीन हजार सात सय एक मत मात्र प्राप्त गरे ।
सुरेन्द्र बारका लागि नयाँ अनुहार थिए । उनी बारको केन्द्रीय सदस्य पनि थिएनन् । पूर्व नेकपा एमाले निकट रहेका थापालाई नेकपाका नेता रघुजी पन्तले जवर्जस्ती पेलेर टिकट दिएका त हुन् तर बारमा रघुजीको हिसाव कितावले हावा खायो ।
थापाले महासचिवमा जितेको खण्डको अर्को पटक निर्वाचन हुँदा उनी अध्यक्ष पदको दावी गर्छन् भन्ने सर्कुलर भित्र भित्रै भुसको आगो जसरी फैलाइयो । यो प्रपञ्च थापाले बुझ्नै सकेनन् जसले गर्दा थापालाई काठमाडौकै मतदाताले धोका दिए । उनलाई हराउन बुनिएको यस्तो प्रपञ्च अहिले वकिलहरुबीच व्यापक चर्चामा छ ।
महासचिवमा थापालाई हराउन पूर्व माओवादीहरु र अध्यक्ष पदका उम्मेदवार चण्डेश्वर नै स्वयम् कम्मर कसेर लागेका थिए । लोकतान्त्रिक समूहका एक वकीलका अनुसार महासचिवमा थापा हार्नु पूर्व एमाले र माओवादी वकिलहरुबीचको अन्तर्घात हो । उनलाई प्रगतिशील समूहले त धोका दियो नै लोकतान्त्रिक पक्षले पनि असहयोग ग¥यो ।
बार निर्वाचनमा १० हजार एक सय ४१ मतदाता थिए । जसमध्ये आठ हजार तीन सय २८ जनाले मतदानमा सहभागिता जनाएका थिए ।
झण्डै ३० वर्षपछि साउदी अरबले इराकमा कन्सुलेट खोल्यो
फिटनेसका लागि योगा गर्छिन भारतीय नायिका प्रियंका
दुबई पठाईदिन्छु भन्दै १० लाख बढी ठगी गर्ने पक्राउ
शिव कुमार घर्ती मगरले वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा दुबईमा वर्किङ भिषामा आकर्षक तलव...
भुक्तानीको मुद्दाले प्रदेश दुई सरकार संकटमा
प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित योजनाहरुको रकम भुक्तानी नभएको भन्दै प्रदेश २ सरकारविरुद्ध...